Policeka Magalada Dubay oo ka Digaya Xotoyo loo Geeysto Baabuurta – Balcad.com Teyteyleey
Policeka Magalada Dubay oo ka Digaya Xotoyo loo Geeysto Baabuurta
Magaalada Dubai oo ah mid ay ku nool yahiin dad fara badan oo meelo kala duwan kalal yimid. ayaa maalmahan waxaa kusoo kordhay falal burcadnimo ka dhan ah baaburta meelaha baarkinga iyo wadooyinka la dhigto.
taliayaha Saldhiga Al Buhairah oo saxaafada lahadlay ayaa yiri kiiska ugu badan ee nasoo garaa waa xotooyo loogeeysto baaburta. waxana lagula kaca dhac ah in ay tuugo jabsanda baabuurta safan melaha baaburta la dhigo iyo wadooyinka marka dadka ay dukameysanayaan. waxana laga qataa waxyabaha u saran gariga oo fudud
tuugada ayaa waxaa ay jabiyaan muryaada gariga marka maleyan in ay ka helikaraan lacag, mobile iyo laptop yo iyo waxyabo kale oo qaali ah. melaha dhika ugu badan ka dhaco waxa kamid ah Al Buhaira Corncihe, Al Majaz and Al Nadah booliska ayaau digyaa dadka kunool magalda bubai ineey mujiyaan taxadar dheeri oo ay baaburta dhigtan malaha kamarida kuxirantahay iyo ineeysan uga tegin gadiidkooda melaha wadooyinka
The post Policeka Magalada Dubay oo ka Digaya Xotoyo loo Geeysto Baabuurta appeared first on Ilwareed Online.
Al Shabaab oo qarxisay Buundadii Bariire